/Blog/Boldenone/I-Boldenone Undecylenate: I-8 I-Outoid Effects Effects Uya Kufuna Ukuyiphepha
ezaposwa ngomhla 04 / 08 / 2019 by UDkt Patrick Young bha liweyo Boldenone.
Yonke into ngeGarcininia Boldenone Undecylenate
1. Yintoni i-Equipoise (iBoldenone Undecylenate)
2. Izixhobo ze-Equipoise (Boldenone Undecylenate)
3. Isixhobo se-Equipoise (Boldenone Undecylenate)
4. I-Equipoise (i-Boldenone Undecylenate) Umjikelo kunye nesisombululo
5. I-8 Equipoise (i-Boldenone Undecylenate) nemiphumo emibi ofuna ukuyiphepha
6. I-Equipoise (iBoldenone Undecylenate) iresiphi yasekhaya
7. I-Boldenone Acetate & Boldenone Cypionate
8. Kuphi ukufumana iBoldenone?
Yintoni i-Equipoise (iBoldenone Undecylenate)
Equipoise(Boldenone Undecylenate) i-testosterone etholakala i-anabolic-androgen steroid (AAS) eye kwi-market ukusuka kwi-1940s. Kukho inani lama-Boldenone esters kuquka iBoldenone Cypionate, i-Boldenone Acetate.
Ekuqaleni, i-equipoise yayisetyenziswa kuphela ngabagqirha bezilwanyana kude kube yilapho emva kwe-1950s xa i-Ciba ibonisa ibakala layo lomntu. Abaphengululi baqulunqe i-equipoise yeehashe ngenjongo yokuphucula isondlo sabo kunye nesisundu somzimba.
Abakhi bezakhiwo ababeyisebenzisayo bavuya kakhulu ngempembelelo ephawulekayo yokuba le steroid ipakishwe. Ukongeza kuloo nto, akuzange kubangele ukugcinwa kwamanzi ngenxa yoko kwakungekho ndawo yeso sibonakalo esibi.
Yayifumaneka kwinkalo yezokwelapha kwaze kwaba yi-1970 emva koko ihoxisiwe. Ukuba yinto enqabileyo, itholakala kuphela ngabagqirha bezilwanyana kunye neemarike ezimbalwa. Unamagama amashishini athengisa i-Bold-one, iBoldoject, iBoldane, iBoldebolin, i-Equigan, ne-Equidex phakathi kwabanye.
Izixhobo ze-Equipoise (Boldenone Undecylenate)
Equipoise Vs ukubola
Uninzi lwabalimi bomzimba baye bazama ukuthelekisa Deca ne-Equipoise. Zombini i-steroids ziphela ekugcinweni kobunzima bomzimba kunye nokuzuza kwamandla omzimba. Bobabili bafezekisa ngoku kwanda kweprotheni synthesis. Enye yeentlukwano kukuba abasebenzisi beCaa kufuneka balandele unyango olusisigxina lwe-post ngenxa ye-esrogen engaphezu kweso.
Ezinye zezilwanyana abazisebenzisayo nge-PCT yiNolvadex, Clomid, kunye neArimidex. Enye yezona zizathu ezininzi zokugulisa umzimba ukujonga ukusebenzisa i-Equipoise. Enye imbambano kunye neCaa kukuba ihlala kwinkqubo yomntu ngenani elide. Ekubeni unokuvavanya kakuhle emzimbeni wakho malunga neminyaka emibini, abadlali abavavanywa rhoqo bakhetha ukusebenzisa i-Equipoise. Isikhathi sokufumana i-Equipoise malunga neenyanga ezintlanu.
Xa kuziwa kwimiphumela emibi ye-boldenone ye-undecylenate ngokumalunga neempembelelo ze-deca, i-equippedquipise ihamba nomhla. I-Equipoise yaziwa ngokuba negalelo le-androgenic njenge-acne, izinwele zobuso kunye nokulahleka kweenwele ngelixa i-Deca idla ngokudibanisa nokugcinwa kwamanzi kunye ne-gynecomastia.
I-Deca iyona khetho oluhle kakhulu kulabo bajonge kuninzi xa i-equipoise isetyenziselwa ukujikeleza. Akumangalisi ukuba abantu abaninzi bakhetha ukusebenzisa i-boldenone yokusika ngenxa yokuba inika iziphumo ezigqibeleleyo.
Ukulinganisa konke, Equipoise ufumana uthando olukhulu kubo bonke abantu ngenxa yeengcipheko ezincinci kodwa ezizinzileyo ezibonelela ngokwemigudu yamandla emisipha kunye nobunzima ngaphandle kokubeka ingxaki yokuxhatshazwa kwemiphumo yecala le-estrogenic. Inokuthi ibe yinxalenye yomjikelezo omde. Ukongezelela, i-Equipoise i-Deca izandla ezantsi xa kuziwa ekukhuthazeni ukuveliswa kweeseli ezibomvu zegazi kunye nokukhuthazwa kwesidlo.
I-Boldenone Undecylenate ikwabelana ngezinto ezifana ne testosterone xa kufikelelwe ekuphuculeni ubuninzi. Bobabini i-steroids baninzi abaphumeleleyo kwaye banako uku:
Gcina i nitrogen
Ukugcinwa kwe-nitrojeni kubangela ukukhula kwemisipha okanye kunoko ukugcinwa kwayo.
Nciphise inani le-hormone ye-glucocorticoid
Ukuvimbela i-glucocorticoids kuqinisa ukuphahlaka kwamaprotheni zibe ziincinci ezincinci ezifana ne-amino acids. Oko kuthetha ukuba zombini i-testosterone kunye ne-equipoise inokunciphisa isigaba se-catabolism of metabolism.
Ngokunciphisa i-hormone ye-glucocorticoid, inani lexesha ukuba imisipha yakho ithathe ukubuyisela emva kokuba uqeqesho luyancipha kakhulu.
Ukwandisa umkhiqizo we-IGF-1
I-Insulin-Like Like Factor Factor 1 (IGF-1) inceda ukuvelisa nokuvuselela amaseli kuwo wonke umzimba. Ngenxa yoko, kukho ukudalwa kwemisipha emikhulu kunye nokuthintela ukuchithwa kwemisipha. Equipoise kunye testosterone ukwandisa imveliso ye-IGF-1 eyakukhuthaza nokwakha umzimba.
Ukuphucula iprotheni synthesis
Iiprotheni akungangabazeki enye yezona zinto zibaluleke kakhulu kumzimba wakho. Yiyo eyenza umzimba ukhule okanye utshintshe. Xa kukho iprotheni engaphezulu emzimbeni, kukho ukuphucula umsizi kunye nokulungiswa kwamathambo. Ngenxa yoko, umntu unokuqeqesha nzima kwaye amaxesha amaninzi.
Ukulungiswa kweethambo ezilungileyo kuthetha ukuba xa uphakamisa ubunzima obunzima kunezo oqhelekileyo; Uya kubuyela ngokukhawuleza kuba inkqubo yokulungisa iya kuba ngcono.
Isixhobo se-Equipoise (Boldenone Undecylenate)
Imiphumo ye-boldenone yokusetyenziswa kwe-nonecylenates ekwakheni umzimba
Nangona ukubeka yonke imizamo yakho kwi-gym, akunjalo na? Kungenokuba buhlungu kukuba emva kokusebenza kanzima kwindawo yokuzivocavoca, awuzange ungeze iipounds kwiimisipha zakho. Ukuba uhlala ukhangele into enokukunceda ekubhakeni ngokukhawuleza, ngokukhuselekileyo nangempumelelo, ngoko ndiya kukuxelela imfihlo.
Uyazibuza ukuba yiyiphi indlela yokusebenzisa i-undecylenate ye-boldenone? Emva koko awubonanga umphumo wokukrokra owenzela ingqungquthela yokungena kwi-intanethi. Nangona kuthatha ixesha elithile, le steroid ivumela umntu ukuba athole ubunzima bomzimba obumzimba. Ukuthelekisa iBoldenone vs Deca Durabolin okanye Anadrol, iziphumo ze-boldenone aziyi kuba ngokukhawuleza.
Inzuzo kunye nayo kukuba ukuzuza kuhlala ixesha elide kwaye kungekhona ngenxa yokugcinwa kwamanzi. Ngoko ukuba ufuna ukubukeka kakuhle kwaye ube yintetho yedolophu, i-Boldenone Undecylenate yindlela yokuhamba.
Mhlawumbi uyazi ukuba awukwazi ukwandisa ubunzima bakho bemisipha xa ungadli ngokwaneleyo. Njengoko indlu idinga izinto ezibonakalayo ezaneleyo, izihlunu zidinga i-carbohydrate, i-amino acids, kunye neeprotheni zibe zininzi ukuba zikhule ngobukhulu. Ngelishwa, uninzi lwabalimi bengazi indlela yokwenza oku.
Ngamanye amaxesha, umakhi womzimba unokucetyiswa ukuba atye ubuncinane iikhalori eziliwaka eziliqela ngosuku olulodwa ukupakisha kwiimisipha ezininzi. Ngamanye amaxesha kunokuba kuninzi.
Oko kukutya okuninzi kuwo wonke umntu, kwaye abantu abaninzi banokukufumana kunzima nokuba badle isiqingatha saloo nto. Unokuba unaloo njongo yokudla iikhalori ezininzi ukufumanisa ukuba ugqityiwe ngaphambi kokuba uqaphele utshintsho kwisayizi yakho yomsila. Iindaba ezilungileyo kukuba enye ye-boldenone esebenzisa ukwakhiwa komzimba kukujongana kakuhle nesondlo esincinci kukunceda ufezekise iinjongo zomzimba wakho.
Ngomlinganiselo we-boldenone we-boldenone undecylenate, unokubona inguqu ebonakalayo yakho Ukutya. Ngenxa yoko, ungadla iikhalori ezininzi neeprotheni njengoko ufuna. Ukusebenzisa ezininzi i-carbs kuya kuthi kwandise inani le-glycogen kwiiseli zakho ze-muscle ngoko kukunika amandla angakumbi ngeli gym. Ngenxa yoko, uya kuba nakho ukuphakamisa ubunzima obukhulu kunokuba uphakamise okwedlule. Kungenxa yesi sizathu ukuba abaqulunqa umzimba kunye nabagijimi abanobudlova benqweno bahlala bekhetha i-boldenone undecylenate.
Amandla yintoni ebangela inkulu. Zama kwaye ungawutyesheli ukuzuza kwamandla kwaye uya kuphawula ukuba imisipha yakho ayifinyelele kwi-mass mass you want them to be.
Ukwandiswa kwamandla ngenye ye-boldenone isebenza ekwakheni umzimba. Iyakwandisa amandla omntu okuxhamla ngokukhethekileyo kwisicwangciso sobunzima be-offseason. Ubuhle kunye nalo kukuba bukhuthaza nokusebenza kwezemidlalo.
Ngokunyuka kwamandla, uya kuba nokukwazi ukuphatha izinto ezininzi ngaphandle kokuba uzive ngathi ujezisa. Unokwazi ukuxelela oko oku kuza kubakho. Uqeqesho oluninzi lithetha ukuba ngoku ufumana izihlunu ezinkulu.
Ukusika kuyinto enye yeBoldenone oyintandokazi ekusebenziseni umzimba. Kuqhelekileyo phakathi kwabakhi bomzimba kunye nabakhuphisanayo abafuna ukunqumla amaninzi amaninzi kwaye bajonge ngokukhawuleza.
I-Boldenone Undecylenate yi-steroid yokusika engumkhuseli obalaseleyo wesisundu somzimba. Xa usukwazi ukuqhuba i-equipoise kumjikelezo wokusika, uya kukhwankqiswa ngendlela oza kulahlekelwa ngayo onke amanqweno angafunekiyo ngelixa izihlunu zakho zisagqibe. I-Boldenone yakho ngaphambi nangemva kwemifanekiso iya kuba bubungqina bokuba ungumntu ohluke ngokupheleleyo.
Ukulahlekelwa ngamafutha omzimba, kufuneka ube ne-calorie deficit. Kuthetha ukuba kufuneka utshise iikhalori ezingaphezulu kunezo ozidlayo. Ngelishwa, ukulahleka kwekhalori kunokukwenza ulahlekelwe izicubu zakho zomzimba njengoko umzimba uzama ukwanelisa ukufunwa kwamandla. Ukutya okulungileyo kunokukukhusela kule nto, kodwa kungenakuqinisekiswa.
Ukuze ugweme ukulahlekelwa izihlunu, unzima kakhulu ukuzuza; unako ukukhetha ukuthatha i-equipped. Akuyikukukhusela kuphela umsila wakho onobuhle ukusuka ekulahlekeni kodwa unemiphumo emihle yokumelana nemeko kwimeko yakho yomzimba.
Abaninzi bomzimba bawusebenzisa ngokubhekiselele kumjikelezo wokusika kwaye bayeka ngexesha lesigqithiso sokugqibela kuba kungenza iziphumo zecala ze-estrogenic.
I-Equipoise (i-Boldenone Undecylenate) Umjikelo kunye nesisombululo
I-Equipoise (iBoldenone Undecylenate) Isondo
I-Equipoise inomdla kwi-versatility njengoko ungayisebenzisa yedwa okanye uyibeke kunye nabanye Anabolic Steroids. I-steroid oyikhethayo incike kwizinto ofuna ukuzifeza.
Iimjikelezo ze-Equipoise zingabalwa ngolu hlobo lulandelayo:
Umjikelezo wokuqala-Ukuba usebenzisa i-Equipoise for the first time, kucetyiswa ukuba uthathe i-300-500mg ye-Testosterone Inanthate / Cypionate kunye ne-400mg ye-Equipoise ngeveki. Umjikelo wesiqalisi kufuneka usebenze kwiiveki ezilishumi elinanye. Ngeli xesha, nawuphi na oqalayo unokukwazi ukubona inani elininzi leenzuzo kwi-mass mass.
Inqanaba eliphakathi- Ukuba ukholelwa ukuba unamazinga aphakathi kwamava kwaye awuqinisekanga ukuba usebenza njani kwi-Equipoise, nantsi izicebiso ezimbalwa; Hlalisa kunye kunye Dianabol kumyinge we-25mg nsuku zonke malunga neyure ukuya kwezine. Ukulungiselela i-Equipoise, i-dosage yanda kancane kwi-400-600mg ngeveki. Isixa esiphezulu sithuba apho lo mjikelo kufuneka usebenze iiveki ezilishumi elinesibini.
Izinga eliphambili- Labo abanamava athile bacebise ukuba bathathe iBoldenone Undecylenateat umlinganiselo weeveki ezingaphantsi kweyeshumi elinesibini kwinqanaba le-600mg ngeveki. I-Trenbolone Enanthate ingaba yinto ephezulu ye-steroid ukuyibeka kunye nomyinge we-400mg ngeveki.
Umjikelo we-Equipoise ungabuye uhlelwe ngokweenjongo zomntu. Nazi iindidi ezimbini;
Umjikelezo wokubhukuda ubonakala ngathi;
I-Dianabol -30mg ngosuku olulawulwa ngeveki 1 ukuya kwiveki ye8
I-Equipoise- 600mg ngeveki elawulwa kwiveki ye-1 ukuya kwiveki ye-12.
I-Boldenone yokujikeleza umjikelo:
Winstrol-35mg ngosuku olulawulwa kwiveki ye1 ukuya kwiveki ye8
I-Equipoise- 500mg ngeveki elawulwa kwiveki ye-1 ukuya kwiveki ye-12
Umjikelezo oqhelekileyo weBoldenone kunye nomjikelezo weT Testosterone ubonakala ngathi;
ICompound Isistim ubude bexesha
Equipoise 400mg / iveki iiveki 15
Testosterone Enanthate 500mg / iveki 15weeks
Nantsi enye inako ekusebenzeni i-equipoise;
Iveki Turinabol Equipoise Testosterone cypionate Nolvadex
1 50mg nsuku zonke 400mg ngeveki 500mg ngeveki
2 50mg nsuku zonke 400mg ngeveki 500mg ngeveki
3 50mg nsuku zonke 400mg ngeveki 500mg ngeveki
4 50mg nsuku zonke 400mg ngeveki 500mg ngeveki
5 50mg nsuku zonke 400mg ngeveki 500mg ngeveki
6 50mg nsuku zonke 400mg ngeveki 500mg ngeveki
7 400mg ngeveki 500mg ngeveki
8 400mg ngeveki 500mg ngeveki
9 400mg ngeveki 500mg ngeveki
10 400mg ngeveki 500mg ngeveki
11 400mg ngeveki 500mg ngeveki
12 400mg ngeveki 500mg ngeveki
13 500mg ngeveki 20mg nsuku zonke
14 500mg ngeveki 20mg nsuku zonke
15 20mg nsuku zonke
16 20mg nsuku zonke
17 20mg nsuku zonke
18 20mg nsuku zonke
19 20mg nsuku zonke
20 20mg nsuku zonke
I-Equipoise (iBoldenone Undecylenate) Isisombululo
Ukuze ugweme ukubandezeleka kwemiphumo emibi, kufuneka ulandele izikhokelo ezifanelekileyo. Khumbula ukuphakama kwesilinganisi esithathayo, umonakalo omkhulu ochaphazelekayo ngenxa ye-estrogenic. Kwakhona, ufanele uthathe isilinganisi esifanelekileyo ukuze ungaphuthelwa ngaphandle kwezibonelelo.
Ngokuqhelekileyo, imilinganiselo yeBoldenone Undecylenate ivela kwi-200-400 mg ngeveki. Kubantu, umyinge we-400mg ubekezeleke kakuhle kwaye ubuncinane ubuncinane bezilingo zabo baya kukhetha ukuthatha. Abanye baya kwi-600mg kuba iyakunyamezela kakuhle kwaye iziphumo zempembelelo ze-equipoise zilawulwa kakuhle.
Ukuqwalasela umsebenzi wokude, amadoda amaninzi alawula / athathwe ngejoza enye ngeveki. Isilingo seBoldenone Undecylenate sinokuhlulwa phakathi kweebini ezimbini okanye ezintathu zegciwane. Ixesha elide leBoldenone Undecylenate lobomi livumela ixesha eliqhelekileyo lokunyusa i-injection kunye nemiphumo engaphezulu elawulwayo.
Kula mabhinqa, i-Boldenone Undecylenate isilinganiselo isilinganisi se-50mg ngeveki. Ngalolu dinganiso, i-virization ayifumaneki, kodwa ukuqonda kwayo kuya kuxhomekeka kumntu. Abanye besetyhini banokunyamezela umyinge we-75-100mg, kodwa ucebise ukuba ungaqala ukuba nomlinganiselo ode uqiniseke ukuba umzimba wakho ukhululekile nge50mg ngeveki.
8 Equipoise (kwicala leBoldenone Undecylenate) ziphumo'll ufuna ukuphepha
Imiphumo emibi ye-Equipoise ayinzima njengaleyo ebangela ezinye i-steroids. Abo baziyo ukuqhuba i-equipped equipoise ngokufanelekileyo, abanakudla ngokukhawuleza nayiphi na imiphumo emibi.
Nangona kukho iingxelo zeBoldenone Undecylenate zingatshintshwa zibe yi-estrogen, kwenzeka ngokungaqhelekanga. Umsebenzi we-estrogen ungase ube phezulu xa uqhathanisa boldenone vs deca, kodwa isiqingatha se testosterone.
Ukunciphisa ubunzima beempembelelo, kufuneka uthathe isilinganisi esifanelekileyo. Unokuqala ngesilinganiso esezantsi kakhulu kwaye ukwandise njengoko umzimba wakho uqhubeka ulungelelanisa. Xa ukwenza oku, unokuvavanya uvelwano lomzimba wakho kule steroid ye-anabolic.
Ukuba uqaphela imiphumo emibi njengokuvuvukala kweenyawo okanye imilenze ephantsi, amabala obomvu ngaphakathi emlonyeni okanye empumleni okanye emzimbeni, intlungu yesifuba, ukuhlanza kwegazi, ukungavamile, ulwimi olubi, isisonguluko, inzuzo engalindelekanga, ulwimi olubi, olungavamile ukuphuma okanye ukuhlala kwebala / kumnyama / okukhanyayo kubonakala kuncedo lonyango.
Ngexesha nangemva kokuba umjikelezo wakho we-Equipoise, unokubandezeleka ngokunyuswa kwe testosterone. Ukuncipha kwenkqubo yakho yemveliso ye-testosterone ingafika nemiphumo eyahlukeneyo.
Kwisifundo esenziwe kwimivundla yindoda, ukuyijoba nge-Equipoise kubangele umonakalo omkhulu wokuzala, ngokukodwa ukunyanzelwa kwe testosterone. Ukuphela kwemveliso yabo ye-testosterone ayinciphile kodwa amazinga abo e-estradiol ayenyuka.
Uninzi lwabasebenzisi abesilisa abahlupheke kwizinga eliphantsi le-serum leptin. Amanqanaba e-testosterone angaphula ngokukhawuleza nje emva kwejoyi lokuqala.
Umsebenzi wezesondo ongenzi kakuhle
I-Equipoise inokuchaphazela yakho SEX ubomi kakubi ngenxa yoxinzelelo lwe-testosterone kunye ne-estrogen dominance apho ihamba nayo. Inganciphisa i-libido yakho, kwaye unokuba neengxaki zokufumana isondo sokulala ngesondo.
Ngamanye amaxesha, kunokubangela ukuba i-gynecomastia ibuye yaziwa njengabantu boobs, imeko enganciphisa ukuzithemba kwakho. Akukho mntu ufuna umfazi wabo ukuba abone abantu boobs endaweni yezihlunu ezinzima.
Okubi nakakhulu, ama-testicles akho anganciphisa, kwaye oku kungenza ube nesibalo se-sperm esiphantsi kunye nokulahleka kwethemba. Ngama-testicles adibeneyo, unokuqiniseka ukuba ukuzala abantwana kunokuba nzima.
Ikhumba elincinci lomzimba
Njengoko kubini i-anabolic kunye ne-androgenic steroid, i-Boldenone inokukunika ubunzima kunye nobukhulu obuye wafuna kwaye ngexesha elifanayo ungeze kwiimpawu zesilisa ezifana ne-acne kunye nesikhumba seoli.
I-Equipoise yandisa imveliso yeoli ye-skin edlalwa kunye nokuphuphuma. Ininzi, i-acne ivela ebusweni nasemva. Ngelishwa, ukusebenzisa i-face wash to reduce them may be futile kuba i-acne ibangelwa ukwanda kwimizimba ye-androgenic emzimbeni.
Umonakalo wezinso kunye nesibindi
I-Equipoise ingakhokelela kumonakalo womzimba, isiphumo esisecaleni esichazwe ngokuguqulwa ngobukhulu, imilo kunye nokusebenza kweentso zabo. Oku kwenzeka kumadoda kunye nabasetyhini kwaye kuncedwe kukuba le steroid i-androgenic.
Kwisifundo esenziwe kwizilwanyana, onogwaja abesilisa abasebenza nge-equipoise babonisa iimpawu ze-hepatic (isibindi) kunye nomonakalo we-renal (intsi). Iimeko ezifanayo zenzeke kubantu, kwaye oku kunokuxhaswa ngophando olukhoyo kwiNcwadi yeMidlalo, iMicrosoft-and Physical Fitness.
Abafazi bahlakulela iimpawu zesintu
Abasetyhini abakwi-equipoise banokuxhatshazwa ngokugqithiseleyo. Oko kuthetha ukuthini ukuba baqaphele ukuba baqalise ukuphuhlisa iimpawu kunye neempawu ezimele zenzeke kuphela kumadoda. Ngokomzekelo, banokufezekisa ubunzima bemisipha abayifunayo kodwa ngexesha elifanayo bakhula iinwele ezingafunekiyo ebusweni. Abafazi abayithandi iibhombe kuzo, kwaye oku kungabikho ukuvala.
Ukongeza phezu koko, abafazi abakwi-equipoise banokulahlekelwa ezinye zeempawu zabo zesetyhini, bandise ulwaphulo kunye namava anzulu kakhulu.
Xa kuthelekiswa nezinye i-anabolic steroids, i-equipoise ibangela umonakalo omncinci kumoya we-cardiovascular system. Nangona kunjalo, kukho ithuba lokubandezeleka kwefuthe elibi kwizinga le-cholesterol yomntu. Nje ngezinye i-androgenic steroids inganciphisa i-HDL yakho (i-cholesterol enhle) kwaye iphakamise i-LDL (i-cholesterol embi)
Ukujongana nalokhu, gcina isondlo esifanelekileyo ngokutya ukutya okunempilo kwaye wongeze i-cardio exercises kwinkqubo yakho yoqeqesho.
Ukuqhaqhazela kunye ne-Equipoise kunokukwenza uhlupheke ngenxa yesifo senhliziyo. Isizathu salokhu kukuba ukusetyenziswa kwayo kunokukhokelela kwiimeko ezinobungozi.
I-Equipoise inokubamba iqhosha lomntu wesalathisi kunye nokwenza abantu abangakaze baxhomekeke kuyo.
I-Equipoise (iBoldenone Undecylenate) iresiphi yasekhaya
I-recoldenone Undecylenate recipe ye-steroid liquid ilandelayo
I-EQ 300mg / ml I-Recipe ye-100ml
Ioli echitshiweyo 62.5ml
Benzyl Utywala 2ml (2%)
I-Boldenone Acetate & Boldenone Cypionate
Boldenone cypionate li-ester elincinci lifaniswa ne-undecylenate. I-Boldenone Cypionate isigamu-ubomi ixesha elide kwaye i-boldenone ye-cypionate ixesha lokubona ikwazi ukuya kwixesha elilodwa kunye nesiqingatha. Ngenxa yoko, i-Boldenone Cypionate dosayo ifaka i-injections rhoqo. Akumangalisi ukuba abo abangawuthandi ijojo abasebenzisi iBoldenone Cypionate steroid. Umlinganiselo we-Boldenone Cypionate ophakathi kwe-100-150mg nge ml.
I-Boldenone Cypionate steroid isetyenziselwa ukuphatha amahashe ukubanceda ukuba bandise ubunzima kunye nokuphucula iingubo zabo zeenwele kunye nesimo somzimba jikelele.
I-Boldenone Acetate eyaziwa ngokuba yi-short-acting Equipoise yi-steroid ene-ester eyahlukileyo. Eyona nto isetyenziswa kakhulu ekuqhumeni kweehashe, kodwa umzimba womzimba uyayithanda I-Boldenone Acetate iinzuzo ngakumbi kwi-mass muscle. I-Boldenone Acetate dosayo yi-400-800mg ithathwa kanye ngeveki.
I-Boldenone Acetate homebrew recipe (uludwe)
Iresiphi ye-Boldenone Acetate;
I-Boldenone Acetate 100mg / ml
2% Benzyl Utywala 2ml
100g Boldenone I-acetate powder 80ml
I-Boldenone Cypionate recipe homebrew (uludwe)
I-Boldenone Cypionate recipe iqukethe;
1ml Benzyl Utywala
I-15ml ioli echitshiweyo
Kuphi ukufumana iBoldenone?
Njengombubi womzimba okanye umdlali wezemidlalo, ukhangele lonke ixesha lokuba kubekho into eyokubeka phezulu kumdlalo wakho. Kwamazwe amaninzi, ke, ukusebenzisa Anabolic Steroids ayinqatshelwe, kwaye kunokuba nzima ukuba ufikelele kuzo. Nangona kunjalo, unokukwazi ukuwafumana lula kwiwebhusayithi ngokusemthethweni. Ukuthenga i-intanethi kuza kunye neenzuzo ezininzi kuquka inkqubo yokuthenga engenamandla.
Kwi-intanethi, unokufunda ngakumbi kwi-steroid ofuna ukuyithenga. Ngokomzekelo, apha ungayifunda ngeRiperoneone ye-Acetate recipe, iBoldenone Cypionate homebrew, yintoni iBoldenone esetyenzisiweyo kunye nayiphi na into onokufuna ukwazi ngayo. Ngexesha ogqiba ngalo ekuthengeni, sele usuxhobile kakuhle zonke iinkcukacha ngokusetyenziswa kwazo. Yaye ukwenza ukuba kungabi nakunzima uxinzelelo kuwe, yonke le ngcaciso ifumaneka kwinduduzo yekhaya okanye iofisi.
Izitolo ze-Intengiso zithengisa ngexabiso elingcono xa kuthelekiswa nezitolo zenyama. Intengo yeBoldenone iya kuba ne-intanethi ngokuthe xaxa kuba unokufumana amacebo angcono. Ukongeza, unokufumana izaphulelo zokuthenga ezininzi. Ngubani ongathandi ukugcina imali engaphezulu kwemali?
Ngaba uyazi ukuba ungathenga iBoldenone ngokungabonakali ngaphandle kokuba wonke umntu awazi malunga nalo? Kwi-intanethi, ufanele uphephe imibuzo emininzi onokuvakalelwa ngayo. Nguwe kuphela kunye nekampani owaziyo kwipakethi yakho kunye nabani na oya kubona imisipha.
The Boldenone ukuthengiswa unomgangatho obalaseleyo kwaye awuyi kukudanisa. Ayingcolisi kwaye akayi kubeka impilo yakho engozini. Yenza i-website evumelekileyo eyenza iimveliso zayo kunye nezixhobo zobugcisa. Unokuqiniseka ukuba iBoldenone yethu yokuthengisa izokunika iziphumo zakho ezifunwayo.
Ungaphinda ufune ukuthenga i-equipped equipped for horses. Yithenge namhlanje, kwaye i-hose yakho ayiyi kuvuya ngakumbi.
I-Equipoise (iBoldenone Undecylenate Injection) I-bulletin yobuchwepheshe, iphepha 1-9
I-Steroid Analysis, ehlelwe nguHugh LJ Makin, iDB Gower, iphepha 815-823
Uhlalutyo lweMichiza lweeNdawo ezingekho kwi-Antimicrobial Veterinary Residues Residues in Food, ehlelwe nguJackF. Kay, James D. MacNeil. Jian Wang, iphepha 193
I-Masteron Inanthate I-Longer Esebenzayo ne-Androgenic Anabolic Steroid (AAS) Indlela yokukhetha i-Steroids i-Powder Suppliers kwi-12 Steps